Finfinnee: arbitrary arrest of Oromos should stop!!! Kichuu
HomeAfaan OromooNewsFinfinnee: arbitrary arrest of Oromos should stop!!!
Finfinnee: arbitrary arrest of Oromos should stop!!!
#Finfinnee: arbitrary arrest of Oromos should stop!!!
“The people on the video [below] are captured by police around Signal, on the street from Megenagna to Aware. They were singing the holiday songs. They haven’t done anything of a threat – nothing!”
#Finfinnee (via inbox): threats, slurs, and intimidation on the rise. Law-enforcement ought to be reinforced!
“Finfinnee keessatti doorsisa cimatu nurra gahaa jira. #Wayyaalaan gareen gurmaaye nama keenya kophaa socho’u eegee arrabsuu, doorsisuu fi maqaa jibbaa dur habashaan ittiin nuwaamtuun nama heddu mufachiisaa jirti. Haalli kun dhimma #lubbuun jiraachuutiin ykn #Finfinnee gad-dhiisanii bahuutiin garaagarummaa waan qabu hin fakkaatu. mootummaan hatattamaan jara kana adabatti deebisuu qaba.
Warra #Esat fi jibba Oromoo qabu hundaaf share godhaa.
ኦሮሞ ፎቢያ ላለባቸው ለነ #Esat ሼር አድርጉ
በቡራዩ አካባቢ ስለተፈጠረው እልቂት አስመልክቶ “እውነታው ሲጋለጥ” በሚል ርእስ OMN ያወጣው ዘገባ
የአርበኞች ግንቦት 7 አቀባበል ከስታደዮም ውጭ የነበረው ድባብ ይህን ይመስላል
Jijjiiramni Wareegama Ulfaataadhaan Argame Olola Dharaatiin Hin Gufatu
(Ibsa ABO – Fulbaana 20, 2018)
Yeroo ammaa waliigaltee Adda Bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti baatii tokko dura irra gahameen lolli gidduu isaanii dhaabbatee, Addi Bilisummaa Oromoo karaa nagaa qabsaawuudhaan akeeka polotikaa isaa galmaan gahuuf hojiitti seenee jira. Akka kanaanis Hoogganni ol’aanaan Addichaa Hayyu-Duree isaa Jaal Daawud Ibsaatiin durfamee Fulbaana 15, 2018 handhuura fi magaalaa guddittii Oromiyaa fi Itoophiyaa tan taate magaalaa Finfinnee seenuun ni yaadatama. Simannaa Hooggana ol’aanaa Adda Bilisummaa Oromoo kana irratti ummatni miliyoonota hedduutti lakkaawamu bahee gammachuu isaa ibsachuunis miidiyaalee biyya keessaa fi biyya alaa hedduudhaan gabaafamaa ture, gabaafamaas jira. Simannaa guddaa fi seena-qabeessi kunis jaalalaa fi deggersa, akkasumas, abdii ummatni keenya ABO fi kaayyoo isaa irraa qabu bareechee kan mul’isuu dha.
Mootummaan Itoophiyaas gama isaatiin waliigaltee araaraa Adda Bilisummaa Oromoo waliin taasisuu irraa eegalee hanga simannaa guddaa fi seena-qabeessa kanaaf haala mijeessuuttis tahe sanaan asitti haalli agarsiisaa jiru adeemsa nagaa fi araaraa kana milkeessuuf fedhii guddaan qabaachuu fi qophii tahuu isaa kan mirkaneessu dha jennee amanna. Walumaagala fedhiin, murannoo fi qophiin yeroo ammaatti gama lachuutiin (Adda Bilisummaa Oromoo fi Mootummaa Itoophiyaa) mul’achaa jiru rakkoo siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa baroota hedduuf Itoophiyaa madda jeequmsaa, beelaa fi hiyyummaa taasisee yoona gahetti furmaata waaraa gochuuf abdii guddaa kan uume dha jechuun ni danda’ama. Jijjiiramni abdachiisaan kun ammoo tolatti osoo hin taane wareegama ulfaataadhaan kan argame tahuun dhugaa eenyu illee haaluu hin dandeenye dha.
Gama kaaniin sochiin nagaa fi araaraa Mootummaa Itoophiyaa fi humnoota siyaasaa adda addaa gidduutti eegalame kun akka gufatuuf kanneen ifaajan namootni,
qaamotnii fi humnootni siyaasaa tokko tokko har’as hin dhabamne. Akka kanaanis guyyoota muraasa dabran kana magaalaa Finfinnee fi bakkoota biroo tokko tokkotti jeequmsa hin feesisne kaasanii ummatoota walitti buusuuf carraaquun mul’atee jira. Gochaan akkasii simannaa Hooggana ABO wajjin wal qabsiifamee raaw’atamuun isaa ammoo qabsoo haqaa Ummatni Oromoo bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa isaa deebisee gonfachuuf taasisaa jiru alagaa biratti maqaa xureessuuf kan akeekkatame tahuu isaa mallattooleen mul’isan hedduu dha. “Qacceen ofiif dhaanee ofumaaf iyya.” akka jedhamu qaamotni shira kana dalagan gochaa fokkataa isaanii kanaaf ummata Oromootti quba qabuudhaan olola dharaa karaa miidiyaalee fi bifa adda addaan tamsaasaa jiraachuus argaa fi dhagahaa jirra. Qaamotnii fi miidiyaaleen gochaa diigaa akkasii irratti bobba’an hatattamaan gochaa kana irraa akka dhaabbatan mootummaa fi qaamotni dhimmi ilaalu hundi gaafatama isaanii bahachuun barbaachisaa dha.
Ummatni keenyas dhugaa lafa irra jiru (abdii jijjiiramaa fi shira abdii kana dukkaneessuuf xaxamu hunda) qajeellootti hordofee hubachuun barbaachisaa dha. Humnootaa fi qaamota araara dhugaa fi nagaa waaraa argamsiisuuf hojjetan waliin dhaabbannee humnoota fi qaamota faallaa kanaa shira xaxan gocha isaanii saaxiluu fi hoongessuun dirqamaa fi gaafatama hunda keenyaa tahuu qaba. Adeemsi jijjiiramaa kan cehumsa gara dimokiraasii dhugaa fi nagaa waaraatti geessu guutuutti milkaawuu kan danda’u yoo hundi gaafatama keenya bahanne qofa jennee amanna. Kana irratti Addi Bilisummaa Oromoo Mootummaa Itoophiyaa dabalee humnootaa fi qaamota dhimmi ilaalu hunda waliin wal marii fi wal hubannoodhaan dalaguu cimsee kan itti fufu tahuu hundaaf mirkaneessa.
Maayyii irratti miseensotnii fi deggertootni ABO, Qeerroon Bilisummaa Oromoo fi ummatni bal’aan Oromoo waliigalatti tuttuqaa humnootaa fi qaamota kamiinuu miira aarii hin feesisne keessa galuu irraa of qusachaa haala mudatu hunda keessatti qajeelfamaa fi murtii Dhaabni dabarsu hojiitti hiikuuf akka carraaqxan ABOn dhaamsa dabarsa. Jijjiiramni wareegama ulfaataadhaan argame olola dharaatiin hin gufatu !
Fulbaana 20, 2018
Oromoon mootummaa federaalaa bulchaa jira. Oromoon naannoo guddaa Oromiyaa bulchaa jira. Oromoon finfinnee keessatti maaliif salphate? – https://t.co/W4gKFHH4bW pic.twitter.com/m2w66p5bnK
— Kichuu (@kichuu24) September 22, 2018